၂၀၁၈မှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကို ပြောပြလာတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို | Duwun
Myanmar Idol 1st Runner Up ဆုရှင် ချမ်းမြေ့မောင်ချိုအတွက် ၂၀၁၈ ဟာ အကောင်းအဆိုးတွေ အများကြီး ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်သလိုသင်ခန်းစာတွေ အများကြီး ရခဲ့တဲ့ နှစ်လေးလည်း ဖြစ်တယ်တဲ့။
Myanmar Idol 1st Runner Up ဆုရှင် ချမ်းမြေ့မောင်ချိုက ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကို သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ပြောပြထားပါတယ်။၂၀၁၈ ဟာ သူမအတွက် အကောင်းအဆိုးတွေ အများကြီး ကြုံရတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်သလို အကောင်းဆုံးတွေ ပေးဆပ်ခဲ့ပေမယ့် ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ လိုချင်တပ်မတ်မှုတွေ ပြန်ရခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“2019 လေးမှာ စိတ်သစ် လူသစ် သီချင်းသစ် တွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် ၂၀၁၈ မှာအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ် . အကောင်း အဆိုး တွေ အများကြီးလဲကျော်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်. တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးလဲပေးဆပ်ခဲ့ပါတယ်. ပြန်ရလာတာတွေကတော့ ဆုံးရှုံးမှုတွေရော လိုချင်တပ်မတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေရောပါပဲ ကျေနပ်ပါတယ်” လို့ သူမက ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ(၁) ရက်နေ့က ရေးသားထားတာပါ။
၂၀၁၈ ဟာ သူမအတွက် အမြဲတမ်း အမှတ်တရဖြစ်နေမယ့် နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်သလို သင်ခန်းစာတွေ အများကြီး ရခဲ့တဲ့ နှစ်လေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“၂၀၁၈ ခုနစ်လေးက အမြဲအမှတ်ရနေမဲ့နှစ်လေးပါပဲ.သင်ခန်းစာတွေအများကြီးရခဲ့တဲ့နှစ်လေးဖြစ်သလို ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုတွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ် ပျော်ရွှင်မှုတွေလဲအများကြီးရခဲ့ပါတယ် ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်မှာ မိတ်ဆွေကောင်းတွေလဲတွေ့ခဲ့ရပါတယ် အရမ်းချစ်ပေးကြတဲ့ မောင် တို့ကိုလဲ ရရှိခဲ့ပါတယ်” လို့ သူမက ဆက်လက်ပြောပြထားပါတယ်။
လူငယ်အဆိုတော်မလေး ချမ်းမြေ့မောင်ချို့က အခုဆိုရင် ကြော်ငြာရိုက်ကူးမှုတွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်နေရပါပြီ။ကြော်ငြာတွေ ရိုက်ရင်းနဲ့ သီချင်းတွေ ဆိုနေတဲ့ သူမက သီချင်းခွေအတွက်ကိုလည်း သီချင်းသစ်တွေ စုနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"လတ်တလောက ဟိုးတုန်းက ပေါက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးတွေ ပြန်ဆိုဖို့ လုပ်နေတယ်။ ပြန်ဆိုတယ်ဆိုတာကလည်း ကထိန်ပွဲတွေ ဘာတွေမှာ ပရိသတ်တွေမြူးအောင် ဆိုမယ်ပေ့ါ။ စဉ်းစားနေတုန်းပါ။ သီချင်းသစ်တွေကတော့ အခုမှ စစုနေတုန်း။ တေးရေးတွေကိုလည်း အခုမှ ရေးပေး ဖို့အတွက် ပြောထားတုန်းပါ။ သီချင်းတွေက အခုထိတော့ မရသေးပါဘူး။တစ်ပုဒ်လားပဲ ရသေးတယ်။ စောင့်နေတုန်းပေ့ါ" လို့နိုဝင်ဘာ(၂၅) ရက်နေ့က D&C ကြော်ငြာရိုက်ကွင်းမှာ မီဒီယာတွေကို ဖြေဆိုပေးခဲ့တာပါ။ သူမဟာ Myanmar Idol မှာကတည်းက ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာရရှိခဲ့သူပါ။